Umkhiqizi Wefenisha waseChina waseChina kanye Nomhlinzeki | Dongfang
Izici 1. I-Steam Reformer iyisixhobo esikhiqizweni se-hydrogen esebenza ngokuguqulwa komsebenzi, okuyiwona mishini esemqoka yamadivayisi. 2. Lesi sando sokuguqula umusi yisithambisi esikhethekile sangaphandle sokushisa sangaphakathi, esakhelwe njengohlobo lwenhlobo yohlobo lwesithando sokushisa ngenxa yokusabela kwalo okuqinile nokushisa okuphezulu ekuqhubeni. 3. I-Catalyst isishiswa ngokuqondile kumashubhu wokuguqula isimo, kanye nemidiya yokusabela ngokusebenzisa umbhede wethonya okufanele usabele. 4. Izici ezithi di ...
1. I-Steam Reformer iyisixhobo esikhiqizweni se-hydrogen unit ngokuguqulwa kokusebenza, okuyiwona mishini esemqoka yamadivayisi.
2. Lesi sando sokuguqula umusi yisithambisi esikhethekile sangaphandle sokushisa sangaphakathi, esakhelwe njengohlobo lwenhlobo yohlobo lwesithando sokushisa ngenxa yokusabela kwalo okuqinile nokushisa okuphezulu ekuqhubeni.
3. I-Catalyst isishiswa ngokuqondile kumashubhu wokuguqula isimo, kanye nemidiya yokusabela ngokusebenzisa umbhede wethonya okufanele usabele.
4. Izimpawu ezihlukanisa lo mshini wokuguqula kabusha umusi kwezinye izinto zokulungisa ukushisa zidinga ukucatshangelwa, kufaka phakathi isithando somlilo, isisetshenziswa se-tube, ukunwetshwa kohlelo lwamapayipi kanye nokunxephezela, ukuvutha, ukuhamba kwegesi nokusabalalisa, izinto zokuphikisa, njll.
I-300,000t / y ifenisha eqhubekayo yokuguqula kabusha
Isigidi esingu-1 t / y Ifenisha Yokuqhubeka Yenguquko
1,2 wezigidi t / y Ifenisha eqhubekayo yokuBuyisa
I-1.4 million t / y iFenisha eqhubekayo yokuBuyisa
Ngaphambilini: I-Air Preheater
Olandelayo: I-Incinerator Furnace
sesitimela Consulting , Ukunciphisa Block , Heater Ukubika Inkinga YeWindows Isigaba , Chill Water Machine , Rail Transit , Ironworks ,